Thwebula Microsoft Network Monitor 3.4 – Vessoft
WindowsInethiwekhiUkuqapha nokuhlaziywaMicrosoft Network Monitor
Isigaba: Ukuqapha nokuhlaziywa
Ikhasi elisemthethweni: Microsoft Network Monitor
I-Wikipedia: Microsoft Network Monitor
I-Microsoft Network Monitor – i-analyzer yomgwaqo enekhono lokuhlunga idatha ebanzi. Isofthiwe ingavimba futhi ihlaziye noma iyiphi inethiwekhi yethrafikhi bese igcina idatha eqoqwe ukuze kuhlolwe okwengeziwe. I-Microsoft Network Monitor iyakwazi ukuqapha izinqubo kanye nomgwaqo ngesikhathi sangempela, ukuhlaziya izivumelwano, ukusebenza nama-adapters eziningana zenethiwekhi ngesikhathi esifanayo, njll. Isofthiwe inesethi enkulu yezihlungi ezingasetshenziswa ukukhipha imininingwane ethile kusuka iphakheji elibanjwe, elikuvumela ukuba uthole imininingwane edingekayo ngaphandle kolwazi olungadingekile. I-Microsoft Network Monitor inikezela ngolwazi oluningi nemininingwane ehlukene ehlelwe kahle futhi ibeke intuitively.
Ukuhlaziywa kwe-traffic ngesikhathi sangempela
Amandla okuhlunga idatha amaningi
I-analyzer yesikhwama esakhelwe ngaphakathi
Ukudalwa kwezihlungi zenkambiso
Thwebula Microsoft Network Monitor
Amazwana ku Microsoft Network Monitor
Microsoft Network Monitor software ehlobene
Ithuluzi ivivinya uxhumano enethiwekhi izicelo. Isofthiwe ubonisa ulwazi mayelana Izivumelwano abasemazingeni ahlukahlukene.
I-Homedale – ithuluzi lokuhlaziya izindawo zokufinyelela ngaphandle kwe-wireless futhi uthathe izinyathelo ezithile zokulungisa amasiginali angenamandla avela kumaphoyinti we-Wi-Fi noma e-WLAN.
I-LoriotPro – isoftware esebenza ngokuningi ekwazi ukulandelela i-Hardware eminingi exhunywe kunethiwekhi futhi yazise umsebenzisi ngezimo ezibucayi kusengaphambili.
Isofthiwe for umsebenzi ephephile futhi elula nge VPN-amaseva. Futhi isofthiwe kwenza ukufinyelela izingosi evaliwe.
Ithuluzi elinamandla ukubamba amaphakethe inethiwekhi. Futhi isofthiwe has imisebenzi iphakethe zokuhlunga futhi isekela izinhlelo ezikude iphakethe ukuthunjwa.
Isofthiwe ukuphathwa ibanga computer ngokusebenzisa izandiso ekhethekile nokwandisa bandwidth iziteshi slow zokuxhumana.